Froala: Natsurudza Yako Platform Neiyo Yakazara-Inoratidzirwa WYSIWYG Yakapfuma Mavara Edhita | Martech Zone
Chishanu, February 19, 2021 Chishanu, February 19, 2021 Douglas Karr
Kana iwe wakambotanga kudzika nemugwagwa wekugadzira chikuva kwaunoda mhariri meseji izvo izvo-iwe-unoona-ndizvo-zvaunowana (WYSISYG), iwe unoziva kuti zvingave zvakaoma sei. Pandakashanda kumubatsiri webasa reemail, iro basa rekuvandudza uye kuyedza mupepeti wakashanda kupa inoteerera, email yevatengi-email HTML yakatora vagadziri kuburitswa kwakati wandei kuti igadzirise uye igadzirise. Hazvisi nyore.
Chinyorwa chinyorwa chimwe chezvinhu izvo iwe zvaungade kupinza papuratifomu inosimudzira zvakanyanya izvo zvakatorwa, asi haifanire kutora mwedzi kana makore ekuvandudza. Froala Mupepeti unopisa nekukurumidza akapfuma chinyorwa mupepeti icho chakareruka, chakanyatso rongeka, chakachengeteka, uye chiri nyore kuchikwata chako chekuvandudza kuti chibatanidze mune zvese maficha akakurumbira.
Froala Mhariri Dhizaini Zvimiro
Dhizaini Yezvino - yakanaka yemazuva ano interface iyo vashandisi vachangoda.
Retina Kugadzirira - Zvimwe zvakawanda, zvirinani aesthetics uye akapinza mafonti.
madingindira - Shandisa iyo yekumusoro kana yerima tema, kana gadzira yako wega theme uchishandisa YEMAHARA theme theme.
Intuitive Interface - Froala akapfuma chinyorwa mupepeti inopa kwakakwana mashandiro kuburikidza neyakajeka kwazvo interface iyo vashandisi vanozowana zvakasikwa kuti vashandise.
Popups - nyowani, yakanyorwa popups yeinotyisa mushandisi ruzivo.
SVG mifananidzo - Imba yakagadzira SVG mifananidzo, scalable vectorial icons ayo anotaridzika akanaka pane chero saizi.
Tsika Yetsika - WYSIWYG HTML mupepeti ndiyo yega ine chakakosha chigadziriso chishandiso chekuchinja kutarisa uye kunzwa nenzira yaunoda.
Tsika Toolbar - Mabhatani akawandisa? Zvichida hazvisi mune zvakarongeka? Iwe une masimba akazara pamusoro pesharura yemabharaki ekushandisa pane yega yega saizi saizi.
Tsika Yese Iyo Iyo Nzira - Zvese zvinhu zvinogona kuve zvakagadziriswa kana zvakagadzirwa zvakagadzirwa: mabhatani, kudonhedza, popups, mifananidzo, mapfupi.
Bhatani Rekushandisa - Kurerutsa yako yekugadzirisa ruzivo iyo WYSIWYG edhira rekushandisa rinosara riri pamusoro pechidzitiro iwe uchipururudza pasi.
Toolbar Kubvisa - Iyo yakapfuma mameseji edhiraini yekushandisa haifanire kupindirana nemusoro pane peji rako rewebhu, ingoisa offset yaro.
Toolbar Pazasi - Chinja zvirinani chinzvimbo cheWYSIWYG HTML chinogadziridza kubva kumusoro kusvika pasi, uku uchishandisa iyo inonamira bharari kana chakatemwa.
Full Screen - Kubata nezvakawanda zvemukati zvinoda nzvimbo hombe yekugadzirisa. Bhatani rebhatani rakazara rinowedzera nzvimbo yekugadzirisa kune iyo yese peji rewebhu.
Rizere Peji - Kunyora nekugadzirisa rese HTML peji zvakare zvinogoneka. Inobatsira emaimeri, asi kwete chete, kushandiswa kweHTML, HEAD, BODY tag uye kuziviswa kweDOCTYPE kunotenderwa.
Iframe - Izvo WYSIWYG HTML zvemukati zvemupepeti zvinogona kusarudzika kubva kune iro rasara peji uchishandisa iframe saka hapana maitiro kana script kupokana.
Froala Edhita Performance Zvimiro
zvinenge - Katanhatu nekukurumidza kupfuura kupenya kweziso, mupfumi chinyorwa mupepeti anotangisa mune isingasvike makumi mana emakumi.
Lightweight - Nesimba rayo rakabvaruka re50KB chete, unogona kuunza chiitiko chinoshamisa chekugadzirisa kune yako app pasina kurasikirwa nekumhanyisa kumhanya.
Plugin Yakavakirwa - Iyo modular mamiriro inoita iyo WYSIWYG HTML mupepeti kuti ibudirire, ive nyore kunzwisisa, kuwedzera uye kuchengetedza.
Multiple Editors pane Peji - Mumwe kana gumi mameseji edhita pane imwechete peji? Iwe haunzonzwa musiyano, ingozvigadzika kuti zvitangiswe pakadzvanya.
HTML 5 - Froala Rich Text Edhi yakavakirwa kuremekedza uye kutora mukana weiyo HTML 5 zviyero.
CSS 3 - Ndeipi nzira iri nani yekuvandudza ruzivo rwevashandisi pane kushandisa CSS 3? Mhedzisiro mhedzisiro inoita kuti mupepeti awedzere.
Froala Mhariri Mobile Zvimiro
Android uye iOS - Android neIOS zvishandiso zvakaedzwa uye zvakatsigirwa.
Mufananidzo Resize - Froala Rich Text Edhiyo ndiyo yekutanga WYSIWYG HTML mhariri ine mufananidzo resize iyo inoshanda kunyangwe pane nhare mbozha.
Vhidhiyo Resize - wekutanga kuunza resize yemavhidhiyo kunyangwe pavanenge vachitamba. Uye zvechokwadi, inoshanda pafoni zvakare.
wirirana Design - Izvo zvirimo zvauri kugadzirisa zvichave zvinoteerera. Vake WYSIWYG HTML mupepeti anogona kubata mufananidzo resize vachishandisa mapesenti.
Toolbar neScreen Saizi - Kwenguva yekutanga mune yakapfuma zvinyorwa mhariri, iyo barbar inogona kugadzirirwa kune yega yega saizi saizi.
Froala Mhariri SEO Zvimiro
Yakachena HTML - Froala yakagadzira algorithm iyo inongochenesa iyo yega HTML kuburitsa kwavo vakapfuma zvinyorwa mhariri Nyora usina kunetseka, iyo WYSIWYG HTML mupepeti inogadzira yakachena kwazvo kuburitsa, yakamirira kukambawa neinjini dzekutsvaga.
Mufananidzo Alt Tag Tsigiro - Mifananidzo imwe ndiyo chinyorwa chinoratidzwa kana bhurawuza risingakwanise kuratidza mufananidzo. Iwo zvakare iwo mavara anoshandiswa neinjini dzekutsvaga, saka usazvizeye. Mamwe mavara anogona kuiswa mune yekugadzirisa mufananidzo popup.
Batanidza Title Tag Tsigiro - Kunyange hazvo zita rekubatanidza risingazivikanwe kuve nehukuru hweSEO kukanganisa, zvinobatsira vashandisi kufamba zviri nyore kuburikidza newebsite yako. Hazvina kukosha zvakadaro, asi zvakanaka kuve nazvo. Gadza zita rekubatanidza mune iyi popup yekubatanidza.
Froala Mupepeti Chengetedzo Zvimiro
Froala WYSIWYG HTML Edhita ine yakasimba yekudzivirira maitiro ekurwisa XSS. Muzviitiko zvakawanda, haufanire kunetseka nezve izvi, asi tichiri kukurudzira kuti iwe uwedzere mamwe macheki pane yako server.
Pamwe pamwe nekutsigira ese maHTML maficha, mupepeti anodudzirwa mumitauro makumi matatu nemana, ane rutsigiro rweRTL nekuzviona-kwoga, uye Spell Check.
Froala kunyange ane WordPress plugin kubatanidza mupepeti muWordPress yako saiti.
Edza Froala's Online HTML Edhiyo Dhawunirodha Froala
Tags: mupepetinekukurumidza mupepetihtml mupepetimupfumi chinyorwa mupepetichinyorwa mupepetiWordpress mupepetiwysiwygwineswyg mupepeti